The MYAWADY Daily: November 2017
မသန်စွမ်း သူများနှင့် ပတ်သက်၍
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကောက်ယူရရှိထားသော သန်းခေါင်စာရင်းအရ မသန်စွမ်းသူပေါင်း ၂ဒသမ၃သန်း ခန့်ရှိသည်ဟုသိရ၏။ ထိုအထဲတွင် ဆွံ့အ နားမကြားသူများ၊ မျက်မမြင်များ၊ ခြေလက် မသန်စွမ်းသူများ ပါဝင်သည်။
မသန်စွမ်းသူများတွင် ''မသန်သော်လည်း စွမ်းပါသည်'' ဟု ဆိုရလောက်အောင်ပင် ထူးချွန်သူများ အများအပြားရှိသည်ကို တွေ့ရ၏။ နိုင်ငံတကာ အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် ရွှေတံဆိပ်များ ဆွတ်ခူးခဲ့ကြ၏။ ပညာရည်ထူးချွန်သူ များလည်းရှိ၏။ အချို့ဆိုလျှင် ဘီးတပ်ကုလားထိုင် မျိုးဖြင့် အောင်ဘာလေထီ လိုက်လံရောင်းချ ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ဖူး၏။ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသော်လည်း ၎င်းတို့၏ တစ်ဝမ်းတစ်ခါး အတွက် ဘဝကို အရှုံးမပေး ကြသူများအဖြစ် ချီးကျူးရမည်ဖြစ်သည်။
လူသားများက ''မသန်စွမ်းသူ''ဟုဆိုရာ၌ ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မပြည့်စုံသူ၊ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူ၊ အကြားအာရုံချို့ယွင်းသူနှင့် ဥာဏ်ရည်မမီသူများကို ဆိုလိုသည်ဟု နားလည်ထားကြ၏။ ''မသန်''ဟူသည့် စကားလုံးသည် ''ခွန်အား''နှင့်ပတ်သက်ပြီး ''စွမ်း''ဟူသော စကားလုံးသည် ''အရည်အချင်း စွမ်းဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်'' နှင့်ပတ်သက်၍ သုံးနှုန်းသည့် စကားလုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ''မသန်စွမ်းသူ''ဟုပြောဆိုသည့်အခါ လူ
တော်တော်များများက ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မပြည့်စုံသူများကို အထူးသဖြင့် ရည်ညွှန်းသည်ဟု နားလည်ကြ၏။
"မသန်စွမ်းသူတစ်ဦးသည် လူသားအဖြစ် စပြီးမွေးဖွားလာကတည်းက သော်လည်းကောင်း၊ မွေးပြီးမှ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သော်လည်းကောင်း ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံ သို့မဟုတ် ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုချို့ယွင်း အားနည်းနေပြီး သက်တူရွယ်တူများနှင့် ယှဉ်လျှင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရည် တော်တော်များများ လျော့နည်းနေသူများ ဖြစ်နေကြ၏။
ထို့ကြောင့် မသန်စွမ်းသူဖြစ်ခြင်းသည် လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် အမှန်တကယ် ရှိနေသင့်သည့် အခြေအနေမရှိခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည် လျော့နည်းနေခြင်း စသည့်အနေအထား လူသားတစ်ဦးတွင် ရှိနေသင့်သည့် စံချိန်စံညွှန်း မပြည့်မီသူများ တစ်နည်းအားဖြင့် လူစဉ်မမီသူများဟု သတ်မှတ်ထားကြ၏။
မသန်စွမ်းသူများ အပေါ်ဆက်ဆံပုံ လူမျိုးအချို့တွင် သူတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံအရ မသန်စွမ်းသူများကို သိသာစွာခွဲခြား မဆက်ဆံ ကြသော်လည်း အချို့လူမျိုးတို့တွင်မူ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှပထုတ်ကာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်ကြ၏။ ခေတ်ကာလတစ်လျှောက် မသန်စွမ်းသူများ အနေဖြင့် မိသားစုနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲတွင် လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် သိက္ခာရှိရှိ၊ လူသားဆန်ဆန်၊ လူ့ဘဝအဓိပ္ပာယ်ရှိစွာ အသက်ရှင်သန်နိုင်ခြင်း ရှိ၊
မရှိဆိုသည်မှာ လူသားများ၏ ယုံကြည်မှုဓလေ့ထုံးစံနှင့် ယဉ်ကျေးမှု စသည်တို့အပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် မသန်စွမ်းသူ အများစုသည် မိသားစုနှင့်အတူ ရှင်သန်နေထိုင်ခွင့်နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် ရောယှက်ပြီး အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြ၏။ တစ်နည်းအားဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်းမှ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အနေဖြင့် ခေတ်ကာလတစ်လျှောက် ရှင်သန်လာနိုင်ခဲ့ကြ၏။
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် မသန်စွမ်းသူများအပေါ် နားလည်မှုအမြင်နှင့် သဘောထား ခံယူချက်တို့သည် ကမ္ဘာနှင့်တစ်ဝန်း တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲ လာခဲ့ပါပြီ။ မသန်စွမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူမှုရေးကို အခြေခံသည့် ''အမြင်သစ်'' ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် ၁၉၇ဝ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ပြန့်ကျဲနေသည့် မသန်စွမ်းသူများ၏ လူနေမှု အဆင့်အတန်းသည် ယခင်ခေတ်ကာလ တစ်လျှောက်တစ်ခါမျှ မရောက်ရှိဖူးသည့် အဆင့်သို့ မကြုံစဖူး
တိုးတက်လာသည်ကို ယနေ့မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်နေရပြီ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် မသန်စွမ်းသူများ၏ ဘဝသည်လည်း ယခင်နှင့်မတူတော့ပေ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် အတူယနေ့ကာလတွင် မသန်စွမ်းမှု၊ မသန်စွမ်းဖြစ်ခြင်း၊ မသန်စွမ်းသူများ၏ ဘဝနှင့်အနေ အထားများသည် ယခင်နှင့်မတူဘဲ တိုးတက်ပြောင်းလဲ နေပြီဖြစ်၏။ မသန်စွမ်းမှု အမြင်သစ်လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်လေးစုခန့်က မသန်စွမ်းသူများကိုယ်တိုင် အစပြုခဲ့သည့် မသန်စွမ်းမှု ''အမြင်သစ်''တွင် မသန်စွမ်းသူများသည်လည်း လူသားစင်စစ်များ ဖြစ်ကြကြောင်း၊ စက်ရုပ်လည်း မဟုတ်သကဲ့သို့ သတ္တဝါတစ်ပိုင်း လူတစ်ပိုင်း မဟုတ်ဟုလည်း ခံယူလာကြကြောင်း၊ ''လူသား''ဟုဆိုရာတွင်လည်း အားလုံးအတူတူပင် ဖြစ်ကြောင်း ခံယူလာကြပြီ ဖြစ်သည်။ လူသားတိုင်းတွင် တန်းတူအခွင့်အရေး ရှိသည်။ မည်သည့်အခြေအနေတွင် ရှိနေစေကာမူ လူသားမှန်သမျှသည် လူ့အခွင့်အရေး လျော့နည်းမသွားပေ။ ထို့ကြောင့် လူသားဟုဆိုရာတွင် လူသားစံချိန်မီသူနှင့် မမီသူဟူ၍ မရှိ။ မွေးရာပါ လူ့အခွင့်
အရေး တန်းတူရနိုင်သူနှင့် မရနိုင်သူသာ ရှိမည်။
အရေးကြီးသည်မှာ လူသားအချင်းချင်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင် တရားမျှတမှုရှိ၊ မရှိ။ တန်းတူ အခွင့်အရေးရ၊ မရ ဟူသည့်အချက်သည်သာ အရေးကြီး၏။
မသန်စွမ်းသူများ ယနေ့ခံစားနေရသော လူသားစင်စစ် တစ်ဦးကဲ့သို့ ဘဝရှင်သန် နေထိုင်နိုင်ခြင်း၊ လူစဉ်မမီသူများဟု အများကထင်မြင် ယူဆခြင်းများနှင့် အခြားလူမှုရေးမတရားမှု အမျိုးမျိုးခံစားနေမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းမှာ ''သန်စွမ်းသူများ''နှင့် ''မသန်စွမ်းသူများ'' ကြားတွင် ရှိနေသော ခွဲခြားဆက်ဆံမှု အမျိုးမျိုးများကြောင့်သာ ဖြစ်နေသည်ဟု ထောက်ပြ လာကြသည်။
ထို့ကြောင့် ''မသန်စွမ်းမှု၊ မသန်စွမ်းခြင်း''တို့သည် ဘဝကံဆိုးမှုကြောင့် ဖြစ်ရသည်ဟူသော အယူအဆကို တော်လှန်ဖယ်ရှား၍ လူသားနှင့်သက်ဆိုင်နေသော ''လူမှုရေးပြဿနာတစ်ရပ်''သာ ဖြစ်သည်ဟု မျက်မှောက်ကာလတွင် လက်ခံနေကြပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါ၏။
မြဝတီနေ့စဉ်သတင်းစာ စာ (၁၄)
ဘာကြောင့် စာဖတ် ဖို့လိုသလဲ
အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတသည် စဉ်းစားဥာဏ်အတွက် ထင်းနှင့်တူ၏။ စဉ်းစားဥာဏ်သည်ကား ထိုထင်းနှင့်ချက်ရသော ထမင်းနှင့်တူ၏။
လောက၌သင်ယူစရာ များများလှ၏။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ တစ်သက်တာဘဝ အတွေ့အကြုံဖြင့် လောက၏ သင်ယူစရာ ပညာရပ်တို့ကို ပြည့်စုံကုံလုံအောင် သင်ကြားနိုင်မည်မဟုတ်။ မည်သည့် အောင်မြင်သော ကိစ္စမဆို စဉ်းစားဥာဏ်ကို အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ရလေသည်။ ထိုစဉ်းစားဥာဏ်အတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းမှာ ထင်းနှင့်တူသော ဗဟုသုတ ဖြစ်လေသည်။
ထိုအတွေ့အကြုံများ၊ ဗဟုသုတများသည် စာအုပ်စာပေထဲတွင် ရနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် ကြီးပွားတိုးတက် လိုသူတိုင်း စဉ်းစားဥာဏ်၏ အထောက်အပံ့ ကောင်းရရန် စာပေဖတ်ရှုခြင်းအလုပ်ကို မလွဲမသွေလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်၌ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ရှိ စာကြည့်တိုက်များသည် နှစ်ကာလ ကြာမြင့်စွာက တည်ရှိနေသော စာကြည့်တိုက် ကြီးများဖြစ်၏။ မျက်မှောက်ကာလ၌ အချို့သည် e-Library များဖြစ်၏။ ဤစာကြည့်တိုက် များသည် အဖိုးတန် ရတနာနှင့်တူသော စွယ်စုံကျမ်းအစရှိသည့် စာအုပ်စာပေများကို သိမ်းဆည်း သိုလှောင်ထား၏။ အချို့ကား ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်း စာကြည့်တိုက်များ ဖြစ်၍ အထူးလောင်စာ ထင်းပုံကြီးများ နှင့်တူလှ၏။ စဉ်းစားဥာဏ်ဟူသော ထမင်းကို ရရန် ထင်းနှင့်တူသော ထိုစာအုပ်စာတမ်းများကို ဖတ်ရှုရန်လိုအပ် လေသည်။ ဤကားဆရာကြီး ပီမိုးနင်းအတွေးကို ဆပွားတွေးယူခြင်း ဖြစ်သည်။
တိုးတက်သော လူမျိုးသည် စာဖတ်ကြ၍ စာဖတ်သော လူမျိုးသည် တိုးတက်မြဲဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် စာဖတ်သော ဝါသနာကို ပျိုးထောင်နိုင်လေ နိုင်ငံနှင့်တစ်ဝန်း တိုးတက်လေဟုသာ ဆိုရပေမည်။ ယနေ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံများမှ ပြည်သူအများစုသည် စာဖတ်သော ပြည်သူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် နေရာမရွေး၊ ဒေသမရွေး စာကြည့်တိုက်တွင်၊ ကော်ဖီဆိုင်တွင်၊ ရထားပေါ်တွင်၊ ဘတ်စကားပေါ်တွင် စာဖတ်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ဘာကြောင့် စာဖတ်ကြပါသနည်း။ အဖြေမှာ အသိပညာမိုးကုတ် စက်ဝိုင်းကို ချဲ့ထွင်ရန် မိမိထက်ရှေ့ရောက် နေသူများနောက် အမီလိုက်ရန်ပင် ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ၇ဝဝဝ ကျော်မှာ စာတတ်သူ သန်း ၄ဝဝဝ ကျော်ရှိသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂစာရင်း ဇယားများအရ သိရသည်။ ထို့ပြင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၃ နိုင်ငံမှာရာခိုင်နှုန်းပြည့် စာတတ်သည့်နိုင်ငံက ၁ဝနိုင်ငံခန့်သာရှိပြီး ၅ဝရာခိုင်နှုန်း စာတတ်သူက နိုင်ငံပေါင်း ၂ဝခန့်သာရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စာတတ်မြောက်မှု ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂ဝ၁၄ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း အစီရင်ခံစာအရ ၈၉ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့် စာတတ်မြောက်မှု ၆၈ နိုင်ငံမြောက်ဖြစ်သည်ဟု မှတ်သားမိသည်။ မေးရန်မှာ "မြန်မာနိုင်ငံက စာတတ်သူတွေအားလုံး စာဖတ်ကြပါသလား" မေးခွန်းပင် ဖြစ်သည်။ သေချာသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ စာတတ်မြောက် သူများထဲတွင်ဘွဲ့ရလျှင် ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင် ရောက်ပြီဟု ယူဆသူများနှင့် စာတတ်ပြီး စာမဖတ်သူများက အများစုဖြစ်နေ ပေလိမ့်မည်။
စာရေးသူသည် အဏ္ဏဝါသိပ္ပံ တတိယနှစ်ကျောင်းသား ဘဝက ဆရာဖြစ်သူ ဆရာကြီးဒေါက်တာ မင်းသိန်း (မြန်မာနိုင်ငံတွင် စပီရူလိုင်းနားကို စတင်တွေ့ရှိသူ ပညာရှင်) သည် သူ့အိမ်က စာအုပ်စင်ကို ရှင်းလင်းရန် စာရေးသူ အပါအဝင် ကျောင်းသားလေး၊ ငါးဦးကိုခေါ်သည်။ စာအုပ်များရှင်းလင်းစဉ် ပေးစာများတွဲထားသော ဖိုင်တစ်ခုကို တွေ့ရသည်။ဆရာက "နိုင်ငံခြားတွင် ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်း တက်ရောက်စဉ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် သူငယ်ချင်းများက
သူ့ထံသို့ စာအဆက်အသွယ် မပြတ်ကြောင်း၊ မည်သည့် သုတေသနကို လုပ်နေကြောင်း၊ ပညာရပ်နှင့် ဆိုင်သော အသစ်တွေ့ရှိချက် များရှိပါက မျှဝေရန်" စသည်ဖြင့် သူငယ်ချင်းများက ဆက်သွယ်ရေးသားသော စာဖိုင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။
ထိုအချိန်က ဆရာကြီး၏အပြုအမူကို ကောင်းစွာ နားမလည်ခဲ့ပါ။ နောင်မှ "သြော်...ပါရဂူဘွဲ့ရသော်လည်း ပညာကရပ်တန့် နေခြင်းမရှိ၊ ဆုံးခန်းမတိုင် သေးပါလား" ဟူသော အတွေးအမြင်ကို ရခဲ့သည်။ယခုမှ ဆရာကြီး၏ သုတေသနအလုပ်သည် ဇွဲကောင်းအားသန်သည့် စိတ်ဓာတ်ကို ဂုဏ်ယူအားကျမိသည်။
စာပေသည် လူအားလုံး၏မိတ်ဆွေ၊ ဘာသာစကား၏ ယဉ်ကျေးမှု 'စာပေမြင့်မှ လူမျိုးတင့်မည်' ဆိုသောစကားကို ထောက်လျှင် စာပေရှိသော လူမျိုး၊စာပေထွန်းကားသော နိုင်ငံသာ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် တင့်တယ်နိုင်ပေသည်။
သို့ဆိုလျှင် လူသားမျိုးနွယ်စု မတိမ်ကော၊ မပျောက်ကွယ်ရန်၊ စာပေယဉ်ကျေးမှုကို ထာဝစဉ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်လှသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူမျိုးအလိုက် သက်ဝင်လှုပ်ရှား ရှင်သန်နေသော ဘာသာစကား အမျိုးပေါင်း ၆၈ဝဝခန့် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုသို့ ရှင်သန်သက်ဝင်နေသော ဘာသာစကားနှင့် စာပေထဲတွင် မြန်မာဘာသာစကားနှင့် စာပေလည်း ပါဝင်သည်။ ထိုသုိ့ရှင်သန်နေသော စကားနှင့် စာပေများတွင် အင်္ဂလိပ်စာပေ နှင့်စကားက နိုင်ငံတကာသုံး ဘာသာစကားနှင့် စာပေအဆင့် ရောက်သည့်အပြင် တရုတ်၊ အာရဗီနှင့်ဟင်ဒီ ဘာသာစကားနှင့် စာပေတို့ကလည်း လူသန်းပေါင်းများစွာ ပြောဆိုသုံးစွဲကြသည်။
မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်သော ကိုဂျပန်တို့က သူတို့စာနှင့်စကားကို နှစ်သက်မြတ်နိုးစွာ သုံးစွဲကြသည်။သူတို့နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကို အခြေခံဂျပန်ဘာသာ စကားနှင့်စာကို မတတ်ပါက အလုပ်မခန့်ပါ။
မျက်မှောက်ကာလ စာရေးသူတို့နိုင်ငံမှ ကလေးများ ဖတ်စာအုပ်စနစ်နှင့် စာမေးပွဲစနစ် နွံအတွင်းမှ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးပါ။ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘာသာ စာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိကလည်း အရေးမပါသေးသည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်။ စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့ နီတိပညာရေး မရှင်သန် မဖွံ့ဖြိုးသည့်အတွက် နိုင်ငံသား၏ တာဝန်ဝတ္တရား (Civics Duty)၊ ကျင့်ဝတ်တာဝန် (Moral Duty) နှင့် ယဉ်ကျေးပျူငှာမှု (Etiquette Duty) အလေ့အကျင့်ကောင်းများ လျော့ကျ လာသည်။
သည်အချက်ကို ကိုယ်ကျင့်ဝတ္တရား၊ စာရိတ္တဆိုင်ရာ စာပေများ လေ့လာဖတ်ရှု စေခြင်းအားဖြင့် ပြုပြင်နိုင်သည်။
ဘာသာစကား ဆိုသည်မှာ သုံးစွဲမှုနည်း လာသည့်အခါ တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ဥပမာအဖြစ် အေဒီလေးရာစုမှ ငါးရာစုထိ ထွန်းကားခဲ့သော ပျူဘာသာစကားနှင့် စာပေက သက်သေခံနေ ပေသည်။ ဘာသာစကားနှင့် စာပေပျောက်ကွယ်ခြင်းက လူမျိုးပျောက်ရန် ပင်ဖြစ်သည်။
ဘာသာစကားစွမ်းရည်ဟု ဆိုသည့်အခါ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရ L.S.R.W ဟု မှတ်သားမိသည်။ အနာအကြားစွမ်းရည် (Listening Skill)၊ အပြောအဆိုစွမ်းရည် (Speaking Skill)၊ အဖတ်အရွတ်စွမ်းရည် (Reading Skill) နှင့် အရေးအသားစွမ်းရည် (Writing Skill) တို့ကိုဆိုလိုသည်။ ဤတွင် အနာအကြားစွမ်းရည်နှင့် အဖတ်အရွတ်စွမ်းရည်ကို လက်ခံမှု စွမ်းရည်၊ အပြောအဆိုစွမ်းရည်နှင့် အရေးအသားစွမ်းရည်ကို ထုတ်ဖော်မှုစွမ်းရည်ဟု ပညာရှင်တို့ မှတ်ချက်ပြုသည်။
အချုပ်အားဖြင့် စာဖတ်ခြင်းသည် စဉ်းစားဥာဏ် ရင့်သန်ရန်၊ လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် နိုင်ငံတိုးတက်ရန်၊ မှန်ကန်သော အတွေးအမြင်ရရန်၊ စာပေယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရန်၊ စာရိတ္တဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့် ဘာသာစကား ဖွံ့ဖြိုးရန် အတွက် တစ်မျိုးသားလုံး၊ ကောင်းနိုးရာရာ စာပေတို့ကို လေ့လာဖတ်ရှုရန် လိုအပ်ပါကြောင်း 'အစဉ်လေ့လာသင်ယူနေသော လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ထွန်းလာရေး' ကို ရည်ရွယ်၍ ရေးသားလိုက်ရပေသည်။
1 11 2017 Ngwetaryee by TheMyawadyDaily on Scribd
Posted by myawady at 2:27 PM No comments:
1-11-2017 Tayza by TheMyawadyDaily on Scribd
1-11-2017 Thuta by TheMyawadyDaily on Scribd
1-11-2017 The Myawady Magazine by TheMyawadyDaily on Scribd
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ (JMC-S) (၁၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးပြုလုပ်၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်
တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ြ့ကြည့်ေ်ရေး ကော်မတီ (JMC-S) ၏ (၁၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC-S) ၏ (၁၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၃ဝ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မြိတ်မြို့ရှိ ကော်မတီရုံးအစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သည်။
ဦးစွာ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်လင်းအောင်က အမှာစကားပြောကြားသည်။ ထို့နောက်ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များက ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြသည်။
အလားတူ တိုင်းဒေသကြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ (JMC-S) ကော်မတီဝင်များသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ပုလောမြို့နယ်၊ ပြည်ခြားကျေးရွာရှိ ကရင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုး ကျောင်း၌ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများဖြင့် ရှင်းလင်းပြသကြရာ ဒေသခံပြည်သူများက သိရှိလိုသည်များ ပြန်လည်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်လှည့်ဆေးကုသရေးအဖွဲ့က ပြည်ခြားကျေးရွာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှ ဒေသခံပြည်သူများအား အဆိုပါ ကရင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၌ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် အရိုးရောဂါ၊ ခွဲစိတ်ရောဂါ၊ သားဖွား/ မီးယပ်ရောဂါ၊ ကလေးရောဂါနှင့် အထွေထွေရောဂါ ဝေဒနာရှင် ဒေသခံပြည်သူ ၁၁၅ ဦးကို လိုအပ်သည့်ဆေးဝါး ကုသမှုများ ဆောင်ရွက် ပေးပြီး ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်း စစ်ဆေးပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများ လုယူသွားသည့် မြင်းလွတ်ရဲကင်းစခန်းမှ သေနတ် ၂ လက်ပြန်လည်ရှာဖွေ တွေ့ရှိ
မြေကြီးအတွင်း မြှုပ်နှံထားသော သေနတ်များကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရှာဖွေ တွေ့ရှိစဉ်။
ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ ရှိသည့် ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက် သမားများလုယူသွားသည့် သေနတ်များကို တွေ့ရစဉ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်၊ မြင်းလွတ် (ရွာသစ်) ကျေးရွာ၌ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ လုံခြုံရေးလိုက်ပါ၍ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် လူဦးရေတိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ် အဆိုပါကျေးရွာရှိ လူနေထိုင်ခြင်းမရှိသော အဒူလာကိန်း (ဘ) မော်ခလောက်၏ နေအိမ်နောက်ဖေး ခြံဝင်းအတွင်း မသင်္ကာဖွယ်မြေကြီးများ ပွနေသဖြင့် တူးဖော်ကြည့်ရာ ပီနံအိတ်ဖြင့် ထည့်ထားသော ဘီအေ-၉၄ သေနတ် ၁ လက်၊ ၎င်းကျည်အိမ် ၁ ခု၊ ၃၈ ဗို့ခြောက်လုံးပြူး သေနတ် ၁ လက်တို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး ချက်များအရ အဆိုပါလက်နက်များသည် သြဂုတ် ၂၅ ရက်တွင် ARSA အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်သမားများက ရဲကင်းစခန်း ၃၀ ခုအားတစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ် များ၌ မြင်းလွတ်ရဲကင်းစခန်းမှ ပါရှိသွားခဲ့သည့် လက်နက်များဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Two guns looted by extremist ARSA terrorists from Myinlut police outpost recovered
Security personnel checking the recovered guns and magazine.
Two guns andamagazine were found in the backyard of an empty house in Maung-taw Township northern Rakhine State this morning while police and officials were checking the population list. A combined team comprising officials of Immigration Department under police escort foundasuspicious soft ground at the backyard of the empty house owned by Abdular Kein son of Maw Khalauk at Myinlut (New Village) while on their mission to check population registration. When they dug up the soft ground, they found one BA-94 andamagazine and one point 38 revolver packed inabag.
A through check revealed that these are the weapons that were seized from Myinlut police outpost during the synchronized terrorist attack committed by extremist ARSA terrorists on 30 police outposts on 25 August.
1 11 2017 Yadanarpondaily by TheMyawadyDaily on Scribd
1-11-2017 the Myawady Daily by TheMyawadyDaily on Scribd